Ilayska jeermiska UV
UV Sterilizer sanduuqa
Kormeerka tayada hawada
Faa'iidooyinka jeermiska UV-C
Faa'iidooyinka Nidaamyada jeermiska UV-C waa tiro badan, oo ay ku jiraan: Waxtar u leh dhammaan noocyada noolaha yaryar, oo ay ku jiraan bakteeriyada, fayrasyada, fungi iyo borotokaba Ma jiro wax-soo-saarka jeermiska lagu dilo (DBPs) oo la sameeyay raasumaal hooseeya iyo kharashka hawlgalka oo Fudud si loogu shaqeeyo loona ilaaliyo Ammaan iyo deegaan ahaan f ...
222nm UV Light ma nabadbaa?
Waxaa jira dherer dherer badan oo kala duwan oo ka mid ah muuqaalka ballaadhan ee UV, mid walbana wuxuu leeyahay codsi u gaar ah iyo astaan ​​badbaado. Dhererka dhaadheer ee dhaadheer sida UVA iyo UVB waxay qatar ku noqon karaan caafimaadkaaga, laakiin UVC 222nm ayaa amaan u ah meelaha banaan ee la haysto ...
Wax ku oolnimada 222nm Ultraviolet Light oo ku saabsan jeermiska dusha sare ee SARS-CoV-2
Daraasad dib loo eegay oo lagu daabacay joornaalka Mareykanka ee Xakamaynta Cudurka ayaa baaray waxtarka Far-UV 222 nm ee ka dhanka ah SARS-CoV-2 (fayraska sababa COVID-19) dusha sare. Daraasaddan, qiyaas yar oo Far-UV 222 nm ah oo ah 3 mJ / cm2 waxay sababtay hoos u dhac 99.7% ah "macquul ah" SARS-CoV-2 ...
DAGAALKA COVID-19: ISTICMAALKA NALKA ULTRAVIOLET SI LOOGU SAMEEYO CT SCANANSADA
Baadhitaanka CT-ga ayaa muhiim u ah in la sawiro cudurada sambabaha oo ay ku jiraan COVID-19, laakiin jeermiska mashiinada u dhexeeya isticmaalka ayaa waqti badan qaadanaya. Hal koox oo cilmi baarayaal ah ayaa laga yaabaa inay ku degeen xalka. Vanessa Wasta iyo Sarah Tarney / La daabacay Dec 8 Dadaal lagu doonayo in lagu dardar galiyo aalada sawir qaadista shaqada, cilmi baaris ...
Nooca laydhka UV ee loo yaqaan 'Far-UVC' waa badbaado in loo isticmaalo dadka iyo dilalka> 99.9% ee Hawada Coronaviruses: Daraasad
Juun 25, 2020 - In ka badan 99.9% ee coronaviruses xilliyeedka ee ku jira dhibcaha hawada ayaa la dilay markii loo soo bandhigay mowjad gaar ah oo ka mid ah iftiinka ultraviolet kaas oo ammaan u ah in lagu isticmaalo dadka, daraasad cusub oo laga sameeyay Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Columbia University. “Iyada oo ku saleysan natiijooyinkayaga, con ...
UV Light ma dili kartaa fayraska 'Coronavirus-ka cusub'?
Iftiinka Ultraviolet (UV) waa nooc shucaac ah. Waxay ka awood badan tahay hirarka raadiyaha ama iftiinka muuqda laakiin ka tamar yar raajada ama gamma rays. Waxaa lagugu soo bandhigi karaa iftiinka UV-ga iyada oo loo marayo qorraxda dabiiciga ah ama iyada oo loo marayo ilaha dadku sameeyo sida sariiraha maqaarka. Iftiinka UV-ga waxaa loo adeegsaday qaab lagu dilo jeermiska sida ...
Waa maxay tiknoolajiyada UV iyo UV-C
Waa maxay UV? Waxaa badanaa loogu yeeraa 'iftiinka' ultraviolet, laakiin UV waa nooc shucaaca elektromagnetic-ka ah oo leh dherer dhererkoodu ka yaryahay iftiinka la arki karo kana dheer raajada. UV radiation-ka wuxuu u dhacaa seddex qaybood iyadoo kuxiran dhererkeeda: UVA, UVB iyo UVC. Wax yar ka sii dhererka dhererka, mor ...
Jaamacadda Kobe iyo Ushio Prove 222 nm Far UV-C Light waxay yareyneysaa tirinta bakteeriyada waxayna sababi kartaa inaan waxyeello u gaarin maqaarka dadka
Shucaaca Ultraviolet C (UVC) waxaa lagu qeexaa 100 - 280 nm dhererka dhererka UV. UVC ka timaadda qorraxda UV ma gaari karto dusha sare ee dhulka, maxaa yeelay noocyadan kala duwan ee UV waxaa qaata lakabka ozone-ka. Cudurka jeermiska caadiga ah ee UVC (254nm wavelength) waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo meelaha aan la qabsan sida ...
Waa maxay UV-C Keenida Awooda ileyska Qorraxda ee Gudaha
Waa maxay UV-C Keenida Awoodda Qorraxda ee Gudaha UV Spectrum UV-A, UV-B, iyo UV-C dhammaantood waa qeyb ka mid ah muuqaalka iftiinka 'ultraviolet light spectrum'. UV-A wuxuu keenaa maqaarka maqaarkiisa waxaana loo isticmaalaa daawo lagu daaweeyo jirrooyinka qaarkood ee maqaarka. UV-B wuxuu leeyahay awood aad u fara badan oo wax lagu dhex galo iyo r ...
Nalalka UV-da iyo Laydhadhka: Shucaaca Ultraviolet-C, jeermiska-dila, iyo Coronavirus
Marka la fiiriyo cudurka hadda dilaaca ee Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) oo uu sababay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus SARS-CoV-2, macaamiisha ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan inay iibsadaan laambadaha' ultraviolet-C (UVC) si loogu nadiifiyo dusha guriga ama meelaha la midka ah. FDA waxay bixineysaa jawaabo su'aalaha macaamiisha ee ku saabsan ...
6 Faa'iidooyinka Isticmaalka UV Light ee jeermiska
Hababka jeermiska-dilaha ee dhaqameed ayaa loo isticmaali jiray qarniyo - laakiin miyay ku filan yihiin? Runtu waxay tahay in xitaa nadiifinta ugu adag ee biyo kulul, warankiilo, iyo jeermis dilayaasha ay seegi karaan jeermiska iyo bakteeriyada waxyeelada leh. Xaaladda ugu xun, waxyaabahaasi waxay sababi karaan jirro ama xitaa dhimasho. ...
Bakteeriyada iyo Feyraska iyo iftiinka UVC ayaa dili kara?
Waa maxay bakteeriya iyo fayras? Bakteeriyada iyo fayrasku waxay ku safri karaan hawada, waxayna sababi karaan cudurro ka sii daraya. Waxay hawada u galaan si fudud. Marka qof hindhiso ama qufaco, biyo yar ama dhibco yaryar oo dheecaan ka buuxo oo ay ka buuxaan fayras ama bakteeriya ayaa ku kala firidhsan hawada ama waxay ku dambeeyaan gacmaha meeshuu ku fido
Tayada marka hore, marka hore daacadnimada
Room 102, Quanshan Mining Science Park, magaalada Xuzhou, gobolka Jiangsu, Shiinaha 221000